I-Polyethylene yeChlorine yeRubber
Uncedo lokuqhubekeka kwe-Acrylic kwiimveliso zePVC zokukhupha
IziHlomelo zeMveliso yoShishino
Icandelo elinye leemulsion yepeyinti yentsimbi ephuma emanzini
izinto ezisebenza ngokukhawuleza zokutshiza ezenziwe ngomgangatho wenziwe ngomgangatho
Uyisebenzisa njani ipeyinti yerabha eneklorini?
1): Gquba ipeyinti ngaphambi kokuyisebenzisa, coca ioyile, amanzi, uthuli kunye nokunye ukungcola ebusweni. (Kuyacetyiswa ukuba kususwe umhlwa nge-sandblasting ukuya kwinqanaba le-Sa2.5 okanye ukususwa komhlwa ngesandla kwinqanaba le-St3) ukuqinisekisa umgangatho wepeyinti. Ukupakisha: 20 kg ngomgqomo. Ukugqitywa kwesilivere pai ...
Irabha enekhlorini: Inzuzo yokungabinako 1. Ukungena kwamanzi kunye nokungena kweoksijini kwefilimu yepeyinti iphantsi kakhulu, yi-1/10 kuphela yentlaka ye-alkyd, ke ngoko inokumelana namanzi kunye nokumelana.2. Irabha enekhlorini ayifakwanga ngokwemichiza, ke ...
Yintoni umgca wokumakisha isikhululo seenqwelomoya? Kutheni ufuna irabha eneklorin kulo mzobo?
Umgca wokumakisha isikhululo senqwelomoya ubhekisa kumakishi wesilumkiso somhlaba, iitekisi zesikhokelo somhlaba, iipateni, ii-LOGOs, njl. Ukusetyenziswa komgca wokumakisha kwisikhululo seenqwelomoya: 1 ...
Uthotho lwendlela yokumakisha, kubandakanya uhlobo oluqhelekileyo lokunyibilikisa ubushushu kunye nohlobo olushushu lokunyibilikisa, olulungele utshintsho lokumakisha kwezithuthi kwi-asphalt okanye kwiipavumente zekhonkrithi zokuhamba okungafaniyo, ngombala wepeyinti onzima, ukuxhathisa i-abrasion kunye nokumelana nemozulu, umbala o ...
Izinto eziqhelekileyo zokuncedisa i-PVC kunye nokusebenza kwayo zezi zilandelayo:
Izinto eziqhelekileyo zokuncedisa i-PVC kunye nomsebenzi wayo zezi zilandelayo: 1.Ukuzinzisa ukufudumeza: ukuthintela i-PVC ukubola, ngokuthetha ngokubanzi, kuphucula ubushushu obuzinzisa ubukhulu becala. 2.Organic tin somfanekiso: isuti yeemveliso ezinzima zepayipi okanye zepayipi, ifestile. 3.Cal/Zin someleza: akukho ...
Iipropathi ezahlukeneyo zokugquma xa usebenzisa i-calcium kunye ne-zinc stabilizers kwi-calbe?
Kutheni le nto ikhebula lokugquma libonisa ipropathi yokugquma eyahlukileyo xa usebenzisa iicalcium kunye nezinc ezizinzileyo? Ngokukodwa, ngenxa yezinto ezibonakalayo zezinto zokuqinisa ezahlukeneyo. Izinto zekhebula ezifuna iipropathi zokugquma ngokubanzi zisebenzisa i-powdered calcium-zinc stabilizers. Okuqhelekileyo ...
Umgaqo osebenzayo we-calcium zinc stabilizer
Umgaqo osebenzayo wecalcium zinc stabilizer: I-Zinc isepha somculo sisilungisi se-PVC. Yindlela emfutshane yokubambelela kubushushu. Isampulu enesepha ye-zinc iya kujika ibemnyama xa kushushu, ebizwa ngokuba yi "zinc burn". Esona sizathu siphambili kukuba i-ZnCl2 evelisiweyo ...
Ngaba i-PVC calcium zinc stabilizer （PVC aids) inokutshintsha indawo yesikhombisi esikhokelayo?
Iingxaki ekufuneka zisonjululwe xa i-PVC calcium-zinc stabilizer ithatha indawo yesikhombisi esikhokelayo: I-calcium yolwelo kunye ne-zinc stabilizer yinkomfa ye-calcium kunye ne-zinc organic ityuwa, i-phosphite, i-polyol, i-antioxidant kunye ne-solvent. Ulwelo lwecalcium zinc luzinzisa luhambelana kakuhle nentlaka kunye neplasticizer ...
Iingxaki ekufuneka zithathelwe ingqalelo kwizixhobo zokudibanisa Kwinkqubo ye-PVC resin, izongezo ezahlukeneyo kufuneka zongezwe ukuphucula ukusebenza kwe-PVC ukuhlangabezana neemfuno zokwenza nokusebenza kwemveliso. Kwimveliso yeeplastiki zeminyango kunye neefestile, ziimpawu ...
Weifang Dehua Polymer New Material Co., ltd inxaxheba kumboniso ChinaCoat e Guangzhou ukusuka 8 ukuya 10, Dec, 2020 ngonyaka. Kumboniso, sidibene nabahlobo abaninzi kweli candelo bonke bonelisekile ziimveliso zethu ezintsha, Izinto zokwenza izinto zokupeyinta ezinje ngeplastikhi enamanzi kunye nerabha ...
Irabha eneklorin ibhekisa kwimveliso eneklorin yerabha yendalo. Umxube we-trichloride kunye ne-tetrachloride enomxholo we-chlorine wama-65%. Irabha enekhlorini iyahambelana kakuhle nee-alkyd resins ezinokulingana okufanayo kunye ne-polarity ephantsi. Ngokubanzi, ii-alkyd resins eziqulathe ngaphezulu kwe-54% ...
Hayi. 788 Minzhu Street Hanting District, Weifang, Shandong, China
Yintoni umgca wokumakisha isikhululo seenqwelomoya? Kutheni nee ...
Izinto eziqhelekileyo zokuncedisa i-PVC kunye nokusebenza kwayo ...